🥇 ▷ Huawei: Mate 30 Pro miyuu la imaadaa duubis xawaare sare leh? - Sirta tirada 7680 ✅
Huawei: Mate 30 Pro miyuu la imaadaa duubis xawaare sare leh? – Sirta tirada 7680
Tan iyo shalay, bogag kala duwan oo warbaahin ah oo leh warbixinno ku saabsan muuqaal cusub oo lagu soo eedeeyay ‘Mate 30 Pro’, kaasoo gaar u noqon lahaa taleefanka casriga. Waxaan shaki ku jirnaa.
Websaydhka Slashleaks wuxuu hadda u muuqday sawirro ah ashyaaada xayeysiinta ee Mate 30 Pro. Waa la arki karaa in kaameeradu ay gaarto 256 laab laab tartiib tartiib ah iyada oo loo marayo 7680 meegaarkiiba halkii. Faahfaahinta kale ee farsamada ayaa sidoo kale u muuqda inay ku raacsan yihiin wararka xanta ah ee hore. Waxaa jiri doona hubaal berrito saacadu markay tahay 2da duhurnimo, markaas oo Huawei’s tooska tooska ah uu u bilaaban doono, isagoo daahfuraya qalabka taxanaha ah ee Mate 30. Halkan waad joogi kartaa halkaas.
Waxyaabaha xayeysiinta ah ee laga xayeysiiyay Huawei Mate 30 Pro | (c) dhedig / 宋敬亭
Fiidiyowyada tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayaa leh rafcaankooda. In kasta oo tikniyoolajiyadan horay looga haystay qaar ka mid ah kaamirooyin qaali ah oo qaali ah, taleefanka casriga ah ee aadka u sarreeya sida Samsung ayaa hadda ka qaadi kara fiidiyowyada ‘Galaxy Note Record 10+’ marka loo eego qiyaas ahaan 960 fps. Haddii aad ku dhejiso fiidiyowgaan markaa 30 fps caadi ah, ka dib waxaa jira gaabis 32-laab ah. Tani waa waxoogaa khiyaanooyin ah qaraarka si weyn ayaa loo dhimay. Haddii kale, qalabka ayaa waligiis qaban karin xaddiga xogta. Si kastaba ha noqotee, tani waa natiijo la yaab leh oo loogu talagalay dareemayaasha yar-yar marka la barbar dhigo kuwa ku jira qalabka xirfadda leh. Iyo Huawei Mate 30 Pro waa inay ku guuleysato xitaa natiijooyin ka sii yaab badan halkan. Xawaare aad u sarreeya oo leh illaa 7680 fps (oo aan lahayn typo!) Waa inay suurtogal ku ahaataa halkan iyadoo loo eegayo farriinta qaar ka mid ah joornaalada teknolojiyada internetka. Fikradeenna, taasi waa su’aal; waxaan wali shaki ku jirnaa.
Kaameradda Quad ee ku taal dhabarka Huawei Mate 30 Pro | (c) Huawei
Dhaqdhaqaaqa gaabiska ah ee Super wuxuu bixiyaa caqabado farsamo
Farsamo ahaan, shot leh 7680 fps oo ku jira taleefan casriga ah ayaa hadda u muuqda mid gebi ahaanba utopian ah. Fiidiyowyada orodka badan ee sida xawliga ah u baahan waxay u baahan yihiin qalab aad u khaas ah. Aaladda dareemeyaasha kamaradaha noocaas ah, maxaa yeelay waxay ku qasban tahay inay soo gudbiso sawirro badan waqti aad u yar, aad u kulul oo aad u kulul haddii aan la qaboojin. Sidoo kale, xusuusintu waa inay buuxisaa shuruudaha gaarka ah, maadaama tiro aad u fara badan oo xog ah loo baahan yahay in la socodsiiyo laguna kaydiyo waqti gaaban. Ujeeddadan darteed, kaameerayaasha xawaaraha sare waxay u isticmaalaan tiro badan oo RAM ah. Tan waxaa loo qori karaa si ka dhaqso badan xitaa xitaa xusuusta ‘Flash UFS 3.0’. Sidoo kale, muddooyinka-tartiib-tartiib ah ee xawaarahaan xawaaraha aad u badan waa lagama maarmaan, laakiin dareeme weyn ayaa faa’iido u yeelan doona.
Nidaamyada kaamirada sida halkan kameradda afarta gees leh ee Oppo Reno 2 waa dhismayaal farsamo oo aad u adag, kuwaasoo dhammaystira heer sare. Laakiin haddii taasi durba ay macquul tahay maanta 7680 fps? Waan shakisan nahay. | (c) Oppo
Laakiin haddii ay dhab ahaantii ficil muujiso fps ku cad sheegashada gaarka ah ee 7680 fps, waa maxay lambarkani markaa? Waxaan si fudud uga shakisan nahay: qaraarka. Xal 8K oo leh cabir dhan 16: 9 lahaa 7680 x 4,320 pixels. Waxaa laga yaabaa in bogga sheyga shiinaha, ee macluumaadku ka imanayo, uu si khaldan u tarjumay lambar baxsaday. Waxay noqon lahayd duubitaan 8K ah oo casriga aan lahayn wax cajiib ah. Ilaa hadda, xadka halkan wuxuu ahaa 4K, halkan sidoo kale, xaddidaadaha qalabka ayaa door ka ciyaara. Waxay kaloo noqon kartaa in tiradu aysan wax shaqo ah ku lahayn kamaradda Mate 30 Pro. Ilaa hadda, ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa maqan. Nasiib wanaag, faahfaahinta ayaa lagu dhawaaqi doonaa berrito, ka dib ayaa shaaca laga qaaday Huawei oo ah taxanaha Mate-30 ee Munich.
Inbadan oo kusaabsan: Camera, 4k (Ultra HD)
Xigasho: Xarumaha Waxbarshada ee XDA